कसरी पार्टनरलाई सेक्सका निम्ति तयार गर्ने, सेक्स कतिबेला र कतिपटक गर्ने ? « हाम्रो ईकोनोमी
कसरी पार्टनरलाई सेक्सका निम्ति तयार गर्ने, सेक्स कतिबेला र कतिपटक गर्ने ?
प्रेमलापका निम्ति न त कुनै समय हुन्छ न त कुनै नियम । प्रेम गर्नेहरु सारा संसार बिर्सेर प्रेम गर्छन् । एकापसमा आलिंगन गर्ने प्रेमीहरुले यो पनि विचार गर्दैनन् कि उनीहरु कहाँ छन् । अर्को तर्फ प्रेमलाप गर्नेहरु सेक्ससँग जोडिएको कुनैपनि काईदा कानून मान्दैनन् । तर धेरै पटक यस्तोपनि हुन्छ कि सेक्सको चाहना सहयात्री साथीको अनिच्छा पूर्ण नहुन सक्छ । त्यसैले पार्टनरलाई सेक्सका लागि कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसले तपाईको सेक्स लाईफ निकै राम्रो हुन्छ । यो मान्नुस कि यदि तपाईको सेक्स जीवन सफल छ भने तपाईको जीवनका समस्याहरुबाट पुरा दृढताकासाथ जुध्न सक्नुहुन्छ र तपाई तमाम् दिक्दारी माथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
यौन क्षमता बृद्धिका लागि धेरै काईदाहरु छन् । यसको निम्ति व्यक्तिलाई परिस्थिति अनुरुप केहि यस्तो काईदाहरु अपनाउनु राम्रो हुन्छ जसबाट साथी खुशी भएर सेक्सका निम्ति तयार होउन् ।
३. यदि प्रियसी खाना तयार गर्दैछिन भने उनको पछि गएर उनलाई आलिंगनमा लिनुस र उनको गला र काँधमा चुम्नुस् ।
४. सेक्स गर्नु भन्दा पहिले दुबैले सँगै नुहाउनुस र मसिनो स्वरमा आफ्नो प्रेमको प्रस्ताब गर्नुस् ।
८. आफ्नो पार्टनरलाई नम्रतापूर्वक आलिंगन गर्नुस र उनको आँखामा आँखा मिलाएर एकटक उनको आँखामा हेरिरहनुस् ।
९. केहि यस्तो नयाँ कुरा गर्ने प्रयास गर्नुस तपाईको साथीलाई त्यस्को कल्पना नै नहोस् ।
सेक्समा भरपुर सन्तुष्टिका लागि मस्तिष्क र शरीरकाबीच तालमेल एकदमै आवश्यक छ । यौन सुख चरम अवस्थामा त्यतिबेला पुग्छ, जतिबेला पार्टनरहरुकाबीच शरीर एवं मस्तिष्कमा एक आपसमा एकाकार हुन्छन् । एकको आनन्द अर्कोलाई आनन्द देओस र एकको सन्तुष्टि दोस्रोको चरम सन्तुष्टि बन्न सकोस् । सेक्स विशेषज्ञका सल्लाह छ कि यदि तपाईं यौन सम्पर्कमा चरम सन्तुष्टि (अर्गाज्म) हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने यी चार तरिकाको अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सेक्स गर्नुस् मोटोपन घटाउनु
विहानमा सेक्स गर्ने तर रातीमा किन नगर्ने भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ । रातीमा खासगरी खाना खाएर बेडमा जाने र सुत्नेबेला सेक्स गर्छन् धेरैजसो जोडिले । तर, खाना खाएर सेक्स गर्नु र खाना खाएर नुहाउनु भनेको रोग निम्ताउनु हो । त्यसैले रातीमा सेक्स गनुभन्दा विहान मै गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । रातीको सेक्समा नयाँपन नहुने पनि बताउने गरिएको छ । –एजेन्सी